Mpikatroka LGBT Nosamborina Nandritry Ny Diaben’ny Taombaovao Bengali, Navotsotra Taty Aoriana Kely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2016 13:57 GMT
Ny 14 Aprily teo, nitazona mpikatroka LGBT efatra ny polisy tao Bangladesh rehefa niseho tamin'ny diabe iray niaraka tamin'ny Mongol Shobhajatra izy ireo, fitanjozorana marevaka ho fankalazàna ny Pahela Baisakh, taombaovao Bengali.
Hatramin'ny 2014, ny sasany amin'ireo mpikambana amin'ny vondrompiarahamonin'ireo vehivavy mifanambady, lehilahy mifanambady, ireo manana taovam-pananahana roa sy nanova taova (LGBT) dia nanomboka nandray anjara tamin'ireo fety fankalazàna ny Taombaovao, taminà diaben'ny fireharehàna, dingana iray feno fahasahiana ho an'ireo vitsy an'isa matetika haratsiana. Tambajotra iray atao hoe Boys of Bangladesh (BoB), toerana tena ifaneraseran'ireo Bangladeshi pelaka amin'ny alàlan'ny media sosialy, no tambajotra midadasika indrindra mitolona ho an'ny zon'ireo LGBT ao Bangladesh hatramin'ny 2009. Nikarakara hetsika marobe nifandray tamin'ny resaka fiarovana ny zon'ireo LGBT ry zareo tao amin'ny renivohitr'i Bangladesh, isan'izany ny famoahana ny gazetiboky voalohany ho an'ny LGBT ao Bangladesh, antsoina hoe Roopbaan, izay natomboka tamin'ny 2014.
Bangladesh, firenena iray izay Miozolmana no betsaka ao aminy, dia manameloka ny fifanambadian'ny olona roa mitovy taova. Ny lalàna manohitra ny firaisana amin'ny lavabody napetraka tamin'ny vanimpotoana fanjanahan'ny Britanika dia manasazy ny firaisan'ny pelaka, fandoavana sazy vola sy famonjàna folo taona na mandrapahafaty.
Faran'izay tena mailo ny polisy satria ireo vondrona ara-pinoana henjam-pihevitra dia nametraka ny fety fankalazana ny taombaovao Bengali ho tsy mifanaraka amin'ny maha-Silamo ary Haram (zavatra voaràra). Mihatra manokana io ho an'ny fitanjozoran'ny Mongol Shobhajatra, izay anaovana ny fombandrazana fitondràna ireo sarontava na endrika biby famantarana.
Tanaty fanambaràna iray nalefa tamin'ny imailaka, nolazain'ireo mpikarakara tamin'ny Global Voices fa tamin'ity taona ity izy ireo dia nikarakara famoriambahoaka iray nomeny anarana hoe “Boishakh, Boichetra sy Bandhutta” (Boishakh, Fahasamihafàna sy Finamànana). Kanefa, naharay fandrahonana vitsivitsy avy amin'ireo vondrona sasany ry zareo izay nilaza ny hetsika Bob sy Roopbaan ho toy ny “fivorian'ny pelaka” ary nandrahona ny hidaroka ireo mpandray anjara amin'ilay famoriambahoaka. Ny alin'ny 13 Aprily, nangatahan'ny polisy izy ireo mba hanafoana ilay famoriambahoaka ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro sy ny filaminana amin'ny Pohela Boishakh, indrindra fa ry zareo no ho lasibatra. Nanaiky izy ireo ary nanafoana ilay famoriambahoaka, nilaza tamin'olona maro araka izay tratrany.
Ny 14 Aprily, nanatevina ny Mongol Shobajatra ny marain'iny ny ankamaroan'ireo mpikambana amin'ny vondrompiarahamonina BoB, tsy nanao sarontava, na marika famantarana na kipitsopitsony, ary samy niala rehefa vita ilay famoriambahoaka. Saingy nanodidina ny tamin'ny 11 ora maraina, ren'izy ireo fa nitàna olona dimy ny polisy, noho ny filazana azy ireo ho nanao fitondrantena nampiahiahy sy ny filazana azy ireo ho nanandrana hanatanteraka fivorian'ny pelaka. Nandeha tany amin'ny paositry ny polisy tao Shahbag ry zareo ary nahita fa nitazona olona efatra ny polisy ary namotsotra iray. Taty aoriana kely, iny hariva iny, dia nampanantsoin'ny polisy ny havan'izy ireo ho avy any amin'ny tobin'ny polisy haka azy ireo. Nolazain'izy ireo tamin'ny resaka an-telefaona tamin'ireo ray aman-dreny ary mivantana fa pelaka ny zanakalahin'izy ireo ary niezaka ny hanao famoriambahoaka.
Ny Desambra 2014, naboraky ny fandalinana iray nataon'ny Boys of Bangladesh sy ny Roopbaan fa miaina anaty tahotra ireo vehivavy mifanambady, ireo pelaka ary ireo manana taovampananahana roa ao Bengladesh. Misy 751 ireo nilaza tena ho pelaka namaly tao anatin'ilay fandalinana. Maherin'ny 50% no nilaza fa miaina tahotra tsy tapaka izy ireo noho ny fironany ara-pilàn'ny nofo ary 25.8% monja tamin'ireo namaly no nilaza fa niaina fanavakavahana. Maro no nilaza fa, na tsy mahafantatra, na tsy afaka mahazo fanohanana araka ny lalàna ry zareo.
Tsy ela akory izay i Tanvir, mpandrindra ny vondrompiarahamonina, no niteny tao anaty tafatafa iray tamin'ny pejin'ny Pink, gazetibokin'ny indiana LGBT, ny fomba fijerin'ny fiarahamonina Bangladeshi ny olona LGBT:
Hetsika iray hafa ho fampahafantarana ny zon'ireo LGBT ao amin'ny firenena ny bilaogy Mukto-Mona an'ireo Bengali mpijery ny maha-olona sady mpisaina malalaka, izay mamoaka tsy tapaka lahatsoratra amin'ny teny Anglisy sy Bangla. Ilay bilaogera nisy namono sady mpanorina ny Mukta-Mona, Dr. Avijit Roy, dia namoaka boky iray tao Bangladesh momba ny fifanambadian'ireo olona mitovy taovam-pananahana, voalohany amin'ny karazany, izay niezaka ny nitondra fijery siantifika sy famaritana azo raisina momba ny fifanambadian'ireo olona mitovy taovam-pananahana noho ny antony samihafa.
Tamin'ny Septambra lasa teo no natomboka nalefa ny Dhee, tantara mahatsikaikin'ny vehivavy iray mitia vehivavy, voalohany indrindra teo amin'ny firenena. Nahasarika olona maro ny hetsika BoB ary tety anaty Facebook no tena tambajotra nielezany.